San Giuseppe da Cupertino, Santo del giorno per il 18 settembre | Ilblogdellapreghiera
Blọọgụ nke ekpere
Saint Joseph nke Cupertino, Saint nke ụbọchị maka 18 Septemba
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 18, 2020 Septemba 18, 2020
(17 June 1603 - 18 Septemba 1663)
Akụkọ banyere St. Joseph nke Cupertino
Giuseppe da Cupertino bụ onye ama ama maka ịgbanye ekpere. Idem ke ini Joseph ekedide eyenọwọn̄, enye ama ama akam. Mgbe ya na ndị Capuchin rụkọrọ ọrụ obere oge, ọ sonyeere ndị Conventual Franciscans. Mgbe obere ọrụ nke ilekọta ịnyịnya ibu ndị nọn ahụ gasịrị, Joseph malitere ọmụmụ ya nke ndị nchụàjà. N’agbanyeghi na ihe omumu a siri ike nye ya, Joseph nwere oke mmuta site n’ekpere. E chiri ya ụkọchukwu na 1628.
Uzo Joseph nwere ike iweghari n'oge ekpere bu mgbe ufodu obe; ụfọdụ ndị bịara ịhụ nke a dịka ha nwere ike ịga ihe nkiri circus. Onyinye Josef mere ka o nwee obi ume ala, nwee ndidi, ma na-erube isi, n’agbanyeghi na mgbe ufodu a nwalere ya nke ukwuu ma chee na Chineke agbahapụwo ya, o buru obubu onu ma kechie ya agwunye nke otutu n’ime ndu ya.
Ndị ọchịagha weghaara Josef ọtụtụ ugboro maka ọdịmma ya na maka ọdịmma nke obodo ndị ọzọ. A katọrọ ya ma nyocha ya site na Njụta Oku; ndị nyocha ahụ kpochapụrụ ya.
E mere Joseph iwu na 1767. Na nyocha e bu ụzọ mee, e dekọrọ usoro 70 nke levitation.
Ọ bụ ezie na levitation bụ ihe ịrịba ama pụrụ iche nke ịdị nsọ, a na-echetakwa Josef maka ihe ịrịba ama nkịtị ndị o gosipụtara. O kpekwara ekpere n'oge ọchịchịrị ma bie Ozizi Elu Ugwu ahụ. O ji “ihe onwunwe pụrụ iche” ya - nnwere onwe ime nhọrọ - too Chineke na ijere ihe o kere eke ozi.
Ihe edepụtaraIso Christianityzọ Kraịst
← Na post gara aga Gara aga post:Egosi taa ma ọ bụrụ na ị kwere Jesus wụsara graces n'ime ndụ gị
Ọzọ Post → Post ozo:Oziọma taa 18 Septemba 2020 na okwu Pope Francis
Mepee saịtị ma nweta ego na Altervista - Disclaimer - Kpesa mkparị - Ushma ọkwa - amụma nzuzo - Hazie nsuso mgbasa ozi